တိုက်ခန်း - moe myint san condo unit for rent Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: Moe Myint San Condo Unit For Rent
Moe Myint San Condo Unit For Rent @ Thingangyun Township (မီနီကွန်ဒို အသစ်လေး စျေးသက်၂သာ၂နှင့် ဌားမည်) 🏠 Mini Condo For Rent @ Thingangyun Township, Very Closed to AKK Shopping Centre . အသင့်နေ ကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားပါမယ်နော် နေရာကောင်း သန့်တဲ့အပြင်စျေးလည်းအသင့်တင့်ပါနော်) << Room Size 941sqft << 1 Master Bed Room & 1 Single Bed Rooms << Middle Floor << Lift , Generator, Security , Car parking << Unfurnished << Fully Renovated Ready TO Stay 💰 💰 Rental Charges: 800,000Ks (NEGO) If you interested to havealook the properties or want to know another properties in any township, Do Not hesitate to call to #Baran iRealEstate. Thanks. မြို့နယ်စုံလုံးချင်း ကွန်ဒို မြေကွက် တိုက်ခန်းများကို(ရောင်း ဝယ် ငှား) ပြုလုပ်လိုပါက တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ိရှင့် ၊ Dataတွင်မပါဝင်သော လုံးချင်း ကွန်ဒို မြေကွက် တိုက်ခန်းများကိုလဲ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့် 📲 09-43087900, 09-777734535, 09 788999950 WhatApp / Viber : 0943087900 EMail - [email protected]